कस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
कस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर ? (सूचीसहित)
काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको बिनिमयदर अनुसार आज अमेरिकी डलर १ को खरिददार ११३ रुपैंया १७ पैसा र बिक्रीदर ११३ रुपैंया ७७ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युरो १ को खरिददार १२६ रुपैंया २९ पैसा र बिक्रीदर १२६ रुपैंया ९६ पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
याे पनि पढ्नुस २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन राष्ट्र बैंकको निर्देशन
त्यसैगरी साउदी रियल १ को खरिददार ३० रुपैंया १७ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैंया ३३ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिंगिट १ को खरिददार २७ रुपैँया ८५ पैसा र बिक्रीदर २८ रुपैंया रहेको छ।
यता, कुवेत दिनार १ को खरिददर ३७३ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर ३७५ रुपैयाँ ०५ पैसा रहेको छ । र, युएई दिराम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ९७ पैसा रहेको छ ।
तालिकामा विस्तृतमा हेर्नुहोसः